Somaliland oo irdaha isugu dhufatey Xarun laga bixin jirey baasaboorka Soomaaliga oo ku taaley Hargeysa – idalenews.com
Maamulka Somaliland ayaa xiray xafiis ku yaalla magaalada Hargeysa oo lagu bixin jiray baasaboorka cusub ee Soomaaliga ee loo yaqaano E-passport.Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland Cali Maxamed Warancadde ayaa sheegay in ciidamada booliska ay qabteen dad ka shaqeynayey xafiis si qarsoodi ah uga furnaa magaalada Hargeysa kaasoo dadka loogu sameyn jiray baasaboorka Soomaaliga ee dawlada federaalka Soomaaliya ay bixiso.
Wasiirka ayaa sheegay in dadka la qabtay la horgeyn doono maxkamad, isagoo ku eedeeyay inay sameynayeen baasaboor aysan aqoonsaneyn Somaliland.
Xiritaanka xafiiskan oo mudo dheer ka furnaa magaalada Hargeysa ayaa waxay ku soo beegantay xilli dadweynaha ay u dhoofayaan Xajka oo hadda loogu socdaalo baasaboorka Soomaaliga ah maadaama aan la aqoonsaneyn baasaboorka Somaliland.
Wasiirka oo arrintaasi ay weydiisay idaacadda BBC-da ayaa sheegay in dadka ay isticmaali karaan baasaboorada ajnabiga iyo kii hore ee Soomaaliya ee cagaarka ahaa, balse aysan aqoonsaneyn baasaboorka cusub ee E-passport ee dawlada federaalka Soomaaliya ay soo saartay.
Dadka reer Hargeysa ayaa horey u qaadan jiray baasaboorka Soomaaliga, waxaana dad ay la hadashay shabakada Raxareeb ay sheegeen inay magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ay u doonanayaan baasaboorka haddii la xiray xafiiskii ay ka qaadan jireen ee ku yaallay Hargeysa.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Tarsan oo sheegay in Shabaab weli ku sugan yihiin degmooyin Muqdisho ka mid ah